Na2CO3 (sodium carbonate) => ? | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
Na2CO3 =? | Isu dheellitirka Kiimikada
Kaarboon sodium =?
Natiijooyinka 92 helay
Na2CO3 + Ba (OH)2 → 2NaOH + BaCO3
kaarboon Sodium kaarboon barium hydroxide sodium hydroxide kaarboon kaarboon
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2CO3 + Ba (OH)2 → 2NaOH + BaCO3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Na2CO3 (sodium carbonate) ka falcelisa Ba(OH)2 (barium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaOH (sodium hydroxide) iyo BaCO3 (barium carbonate)?
Ku shub xoogaa dhibco ah xalka milixda ee Na2CO3 tuubo tijaabo ah oo ay ku jiraan 1ml oo ah Ba (OH) 2 xal
Dhacdada ka dib Na2CO3 (sodium carbonate) waxay la falgashaa Ba (OH) 2 (barium hydroxide)
Xalka cusbadu wuxuu ku falcelin karaa xalka aasaasiga ah si loo abuuro milix cusub iyo saldhig cusub
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2CO3 + Ba (OH)2 → 2NaOH + BaCO3
H2SO4 + Na2CO3 → H2O + Na2SO4 + CO2
acid sulfuric kaarboon Sodium kaarboon biyaha sulfate sodium carbon dioxide
(dd) (dd) (lng) (dd) (kh)
(xoog leh) (trung) (xoog leh) (trung) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2SO4 + Na2CO3 → H2O + Na2SO4 + CO2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2SO4 (sulfuric acid) ee Na2CO3 (sodium carbonate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo Na2SO4 (sodium sulfate) iyo CO2 (carbon dioxide)?
Xalka aashitada ayaa la falgala Na2CO3
Dhacdada ka dib H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa Na2CO3 (sodium carbonate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2SO4 + Na2CO3 → H2O + Na2SO4 + CO2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2SO4 (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SO4 (sodium sulfate) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
Na2CO3 + Fe (OH)3 → 3H2O + CO2 + 2NaFeO2
kaarboon Sodium kaarboon biyaha carbon dioxide
(rnn) (dd) (lng) (kh) (rnn)
(trung) (waa) (xoog leh) (xoog leh)
1 1 3 1 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2CO3 + Fe (OH)3 H 3H2O + CO2 + 2NaFeO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee Na2CO3 (sodium carbonate) kaga falcelisa Fe(OH)3 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo CO2 (kaarbon dioxide) iyo NaFeO2 () ?
Fe (OH) 3 xal ayaa la falgala Na2CO3 adag si loo sameeyo gaaska C
Dhacdada ka dib Na2CO3 (sodium carbonate) waxay la falgashaa Fe (OH) 3 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2CO3 + Fe (OH)3 H 3H2O + CO2 + 2NaFeO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Fe(OH)3 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(OH)3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee Fe(OH)3 () falcelin ahaan u ah?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NaFeO2 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaFeO2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaFeO2 () badeecad ahaan?
etanoic acid kaarboon Sodium kaarboon biyaha carbon dioxide
(dd) (dd) (dd) (lng) (kh)
(xoog leh) (trung) (xoog leh) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee CH3COOH (ethanoic acid) ay kaga falceliso Na2CO3 (sodium carbonate)?
Sidee fal-celintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COONa () iyo H2O (biyaha) iyo CO2 (kaarbon dioxide)?
Xalka acetic acid waxaa lagu daraa tuubooyinka baaritaanka ay kujiraan NaOH
Dhacdada ka dib CH3COOH (ethanoic acid) waxay la falgashaa Na2CO3 (sodium carbonate)
Acetic acid waa asiidh dabiici ah. Si kastaba ha noqotee, waa aashito daciif ah.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CH3COONa ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COONa (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COONa () badeecad ahaan?